Snapdragon 675: ကုမ္ပဏီ၏အလယ်အလတ်တန်းစားပရိုဆက်ဆာအသစ် Androidsis
၏တင်ပြချက်များပြီးနောက် Snapdragon 670 y 710စျေးကွက်ရှိအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည့်ပလက်ဖောင်းနှစ်ခုသည် Qualcomm တွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အဆင်သင့်အသစ်တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်ပထမဖော်ပြချက်အပေါ်အနည်းငယ်တိုးတက်မှုအဖြစ်တည်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ Snapdragon 675 အကြောင်းပြောဆို.
ဤကုမ္ပဏီ၏မိသားစု ၀ င်သစ်သည်တယ်လီဖုန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ဂိမ်းကစားခြင်းဒါကြောင့်သူကပေးထားတဲ့စွမ်းအားဟာအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းတွေဖြစ်ဖို့လုံလောက်ပါတယ် ဆု. ဒီ chipset ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဘာတွေကမ်းလှမ်းသလဲ။
Snapdragon 675 ကို ၁၁nm လုပ်ငန်းစဉ်အောက်တွင်တည်ဆောက်သည်, 670nm မှာပါသော SD10, မတူဘဲ။ ဒါတောင်မှသူကပိုကောင်းတယ်၊ သူမှာရှုပ်ထွေးတဲ့ရှစ်လုံးထုပ်ထားတဲ့အတွက်အားလုံးက Kyro ပါ။ အထူးသဖြင့်၎င်းသည် 2.0 GHz ရှိစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Core နှစ်ခုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ခြောက်ခုကို ၁.၇ GHz ကြိမ်နှုန်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
GPU တစ်ခုအနေနဲ့ chipset သည်ဆth္ဌမမျိုးဆက် Adreno 615 ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှစ်သက်သည်၎င်းသည် System-on-Chip အတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ရန်အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည် ဂိမ်းကစား။ ဤဂရပ်ဖစ်ပရိုဆက်ဆာသည် OpenGL ES 3.2, Open CL 2.0, Vulkan နှင့် DirectX 12 အတွက်အထောက်အပံ့ကိုပေးသည်။ သယံဇာတကြွယ်ဝသောဂိမ်းများကစားသောအခါချို့တဲ့မှုမရှိနိုင်သည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, Qualcomm ကဖော်ပြသည် SD675 သည်ဂီတတွင်စွမ်းဆောင်ရည် ၂၀% ပိုမိုမြင့်မားစေသည်၃၀% ပိုမိုမြန်ဆန်သောကစားနည်းများ၊ ၃၅% ပိုမိုမြန်ဆန်သော web browsing နှင့်လူမှုမီဒီယာတွင် ၁၅% တိုးတက်မှုသည်မကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သော Snapdragon 30 ကိုကျော်လွန်သွားသည်။
နောက်ဆုံးတွင် SoC တွင် X12 LTE modem ပါ ၀ င်ပြီး download speeds 600MB / s အထိ၊ MU-MIMO နှင့် Bluetooth 802.11 တို့ဖြင့် Wi-Fi2ac 2x5.0 ကိုထောက်ပံ့သည်။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီ၏ Quick Charge 4+ မြန်သော casing နည်းပညာကိုထောက်ပံ့သည်။ ဗီဒီယိုကိုစူပါနှေးကွေးစွာရိုက်ကူးနိုင်ပြီး HD တွင် 480 စက္ကန့်လျှင်တစ်စက္ကန့်လျှင်ရုပ်ပုံများကိုဖမ်းယူနိုင်ပြီး FHD + resolution ဖန်သားပြင်များကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။ သော်လည်း နောက်နှစ်အစောပိုင်းအထိဒီ spec တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြသမှာပါ စျေးကွက်ဝင်တိုက်ဖို့ပထမ ဦး ဆုံးထုတ်ကုန်၌တည်၏။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Snapdragon 675: ကုမ္ပဏီ၏အလယ်အလတ်တန်းစားပရိုဆက်ဆာအသစ်